ဘိုကိုဟရမ်၏လုပ်ရပ်ကိုကမ္ဘာ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ အစည်း များ က ရှုတ် ချ ကန့် ကွက် | Burma Muslim
ဘိုကိုဟရမ်၏လုပ်ရပ်ကိုကမ္ဘာ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ အစည်း များ က ရှုတ် ချ ကန့် ကွက်
By burmamuslim on May 9, 2014	နိုင်ငံတကာတွင် ဦးဆောင်နေသော မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းများက ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား ကျောင်းသူ ၃၀၀ နီးပါးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီးနောက် ရောင်းစားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော ဘိုကို ဟရမ် အဖွဲ့အား ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး ကျောင်းသူလေးများအား ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“ဘိုကိုဟရမ်”ဆိုသည်မှာ “အနောက်နိုင်ငံ၏ ပညာရေး ဟရာမ်(အပြစ်ရှိသောအရာ)ဖြစ်၏”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အဖွဲ့မှ တရားဝင်သုံးစွဲသော အမည်မှာ “Jama’atu Ahlus Sunnah lid Da’awati wal Jihad (ဒအ်ဝသ်နှင့် ဂျီဟတ်အတွက် အဟ်လေစွန္နသ်ဂျမာအတ်)”ဖြစ်သည်။
နိုင်ဂျီးရီးယားမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ဘိုကိုဟရမ်၏ လုပ်ရပ်မှာ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်မှုဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်သည်။
*** OIC လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းအချို့ ကန့်ကွက်…..
OIC အဖွဲ့ကြီး၏ အမြဲတန်းအဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဖြစ်သော “လွတ်လပ်သည့် လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်(IPHRC)” က ယင်းလုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချပြစ်တင်လိုက်သည့်အပြင်“ပညာသင်ကြားခွင့်ဟာ အခြေခံလူ့ အခွင့်ရေးဖြစ် သလို အစ္စလာမ့်လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ဘိုကိုဟရမ်က ချိဘွတ်မိန်းကလေးငယ်တွေကို အဓမ္မ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတ ကာ ဥပဒေရော လူ့အခွင့်ရေးဥပဒေတွေပါကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သလို အစ္စလာမ်ကို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက် တာပါပဲ”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
နောက်တစ်ခါ OIC အဖွဲ့ကြီး၏ လက်အောက်ခံ ဆော်ဒီအခြေစိုက် “အစ္စလာမ့်ဖိကာဟ် အကယ်ဒမီ(IFA)” ကလည်း “ပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတာ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်သလို လူသားချင် စာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်တဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုပါ”ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
*** အလ်အဇ်ဟရ် အစ္စလာမ့်တက္ကသိုလ် ….
အီဂျစ်နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော အလ်အဇ်ဟရ်အစ္စလာမ့်တက္ကသိုလ်က ဘိုကိုဟရမ်အစွန်းရောက်တို့၏လုပ်ရပ်အား ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ကျောင်းသူများအား ချက်ချင်းလွှတ် ရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်၍ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အစ္စလာမ်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး၊ ကျောင်းသူတွေကို ချက်ချင်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ”ဟု အလ်အဇ်ဟရ်၏ ကြေညာချက် တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
*** နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ့်ပညာရှင်များသမဂ္ဂ (The International Union for Muslim Scholars) ….
နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ့်ပညာရှင်များသမဂ္ဂ(IUMS)က ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းပြီး အစ္စလာမ့်ရှရီအာဟ် ဥပဒေက တားမြစ်ထားသော ထိုပြစ်မှုမျိုးကို မွတ်စလင်တစ်ချို့၏ နှလုံးသားတွင် လမ်း လွဲ ကျင့် သုံးသည့်အတွက် များစွာစိတ်ထိခိုက်ရပါကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“အစ္စလာမ်သာသနာဟာ သူတို့ပြောနေ လုပ်နေတဲ့ အဲဒီလိုပြစ်မှုတွေကနေ လုံးဝကင်းစင်တဲ့အကြောင်း သမဂ္ဂ အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
*** အိန္ဒိယမွတ်စလင်မဂျလစ်မုရှာဝရဟ် ….
အိန္ဒိယမွတ်စလင်အဖွဲ့စည်းများ၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော “All India Muslim Majlis-e Mushawarat”ကလည်း ဘိုကိုဟရာမ်၏ လုပ်ရပ်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
“နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ ရှိတဲ့ ဘိုကိုဟရမ်လို အဖွဲ့အစည်းဟာ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အီရတ်တို့ ဆီးရီးယားတို့မှာ ရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ မွတ်စလင်နဲ့ အစ္စလာမ့် ရန်သူတွေလိုပါပဲ”ဟု အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇဖရွလ်အစ္စလာမ်ခန်းက ဆိုသည်။
*** တိုရန်ဒိုအစ္စလာမ့်သိပ္ပံ …
ထို့ပြင် ကနေဒါနိုင်ငံက တိုရန်ဒိုအစ္စလာမ့်သိပ္ပံမှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ရှိုတ်ခ်အဟ်မဒ်ကွတ်တီက ဘိုကိုဟရမ်၏ လုပ်ရပ်ကို “အစ္စလာမ့်မူဝါဒတွေကို ဖျက်ဆီးမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်”အဖြစ် ပြောဆိုသည်။
“ဖေကာဟ်ဓမ္ဓသတ်ဥပဒေအားလုံးရဲ့ အလိုအရ ဒီလိုအပြုအမှုမျိုး ဒီလို ကျူးလွန်တာမျိုးဟာ မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မွတ်စလင်မဟုတ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိရာဘာဟ် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် ကို ရောက်သွားပါပြီ” ဟု ၎င်းက Onislam ကို ပြောသည်။
*** မြောက်အမေရိကဆိုင်ရာ အစ္စလာမ့်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း (ISNA)…
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရှေးအကျဆုံးသော မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် မြောက်အမေရိကဆိုင်ရာ အစ္စလာမ့်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းက အစွန်းရောက် ဘိုကိုဟရမ်၏ လုပ်ရပ်မှာ အစ္စလာမ်နှင့် ဆန့် ကျင် သည့် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။
*** အမေရိကန်-အစ္စလာမ် ဆက်ဆံရေးကောင်စီ (CAIR)…
အမေရိကန်-အစ္စလာမ် ဆက်ဆံရေး ကောင်စီ(CAIR)ကလည်း ဘိုကိုဟရမ်၏ ကျောင်းသူ ၃၀၀ နီးပါးအား ပြန်ပေးဆွဲသည့် လုပ်ရပ်မှာ အစ္စလာမ်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး မဖွယ်မရာကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ရှုတ်ချပြော ဆိုသည်။
*** လန်ဒန်မွတ်စလင်အသင်း ….
အလားတူ လန်ဒန်မွတ်စလင်အသင်းကလည်း ဘိုကိုဟရမ်အဖွဲ့အား ပြစ်တင်ရှုတ်ချသော ကြေညာချက် တစ်စောင် အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
– စိုင်ဖုလ္လာဟ်(မြန်မာမွတ်စလင်မီဒီယာ) စုစည်းတင်ပြသည်။